Cision Inowedzera Kufuridzira Kuyera Kuyera Kune Kwavo Ekutaurirana Cloud | Martech Zone
Chimwe chinhu chakakosha iwe chaunofanira kuchengeta mundangariro muMartech indasitiri ndechekuti makambani mazhinji ari pane inoenderera yekuvandudza kutenderera kusiyanisa uye kukura bhizinesi ravo. Ipuratifomu yawakashandisa makore mashoma apfuura inogona kunge isisatovapo. Cision ndeimwe yemakambani ayo andisina kutendeka kubhadhara zvakanyanya senge ndaifanira kuve nawo. Ivo vaive zvirokwazvo mutungamiri wekugovana pamusika kana zvasvika kune hukama hweveruzhinji, asi ivo kubva ipapo vakawedzera kugona kwavo mu kushambadzira kushambadzira indasitiri zvakanyanya.
Muchokwadi, ivo vachangobva kuzivisa maficha nyowani uye zvigadzirwa zvigadzirwa kune iyo Cision Kutaurirana Gore, kusanganisira kusanganisa neGoogle Analytics uye Adobe Omniture kuyera iyo dzoka pane simba investments. Iyi yekuvandudza ichaunza zvakare Cision Dhata Unganidzo, kugona kuongorora uye kuongorora matsva enhau enhau uye maviri matsva eCision Influencer Girafu maficha: "Iwe Unogonawo Kufarira," uye "Trending Influencers".
Cision Kutaurirana Cloud Zvimiro Zvinosanganisira
Multi-chiteshi PR mushandirapamwe manejimendi - inogonesa vashandisi kutungamira mishandirapamwe yePR pane chiteshi, vanokurudzira, zvinoburitswa, email kukanda uye zvemagariro midhiya mune imwe yekudyidzana dashboard.
Kubatanidzwa neGoogle Analytics uye Adobe Omniture inogonesa vatauriri kuti vabatanidze kufuridzira kwekusvikira uye iyo inokonzeresa kufukidzwa kwenhau kune chiitiko pane yavo webhu yekambani uye e-commerce zviitiko. Nekutarisa kubudirira kwePR mushandirapamwe kuburikidza neiyo lens yewebhu analytics maturusi, vatauri vanogona kuratidza maitiro ekuwana midhiya kushambadzira e-commerce mari kana kutengesa kunotungamira pane zvavo zvivakwa.
Iyo Cision Influencer Girafu "Unogona Unogonawo Kuda" ficha inopa zvinofambiswa nedhata zvinotungamirwa nevateereri jogirafi, huwandu hwevanhu uye zvido zvekubatsira kuona vanopesvedzera paTwitter vanogona kusvika kune anotarisirwa mugumo mutengi. "Trending Influencers" inobvumira vashandisi kuti vawane vanokurudzira sezvavanenge vachikwira mukurumbira pane imwe nhaurwa, kuitira kuti vasvike kwavari vasati vakwira mukurumbira.
Iyo Cision Comms Cloud ikozvino inosanganisira Facebook, Instagram uye Youtube zvemukati papuratifomu imwechete sekudhinda, online uye nhepfenyuro zvinhu, kuwedzera kune izvo zvakatove zvakabatanidzwa zveTwitter zvemukati, zvichibvumira vashandisi kuongorora iyo yakazara nyaya munzira dzese dzakakosha. Makomendi, kutaurwa, uye maitiro zvino anogona kuve akapatsanurwa nekambani, meseji, maneja kana zvigadzirwa.
Kuburitswa kwazvino kweCision Comms Cloud kunotarisana nematambudziko makuru muindasitiri: kufamba nenzira dzekutaurirana kuburikidza nezviuru zvevanokurudzira uye dzakawanda nzira. uye kupa chaiyo, yepazasi-bhizinesi kukanganisa kune izvi kuyedza. Zvigadzirwa zvemazuva ano zvinogonesa kushambadzira vekutaurirana kuti vakunde matambudziko aya musoro, wakashongedzerwa nepuratifomu imwe yakazara uye zvine chinangwa analytics uye data. Kevin Akeroyd, CEO weCision
Tags: adobe omniturecisioncision dhata yekubatanidzacision inokurudzira graphkutaurirana gorezvemukati zvinokurudzirwazvemukati mazanogoogle analyticskushambadzira kushambadziramugove wezwivanochinja vanokurudziraiwe unogonawo kufarira
Iyo Nyowani Nyowani Chinhu Podcast: Ine Muenzi Douglas Karr
LinkedIn Inotangisa Linkedin Webhusaiti Demographics